EVY's Kitchen: အုန်းသီးစိမ်းကျောက်ကျော
သင်္ကြန်တွင်း မှာကျောက်ကျောထိုးချင်သူများအတွက် အုန်းစိမ်းကျောက်ကျောလုပ်နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချိုပွဲလေးကတော့ ကျွန်မရဲ့ညီမ လက်စွမ်းပြထားတာပါ။ သူကဗမာ မုန့်တွေလုပ်ရတာ ပိုပြီးအားသန်ပါတယ်။ စားလို့လဲကောင်းပြီး သင်္ကြန်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အုန်းစိမ်းကျောက်ကျောလေးကို စမ်းကြည့်ကြပါဦး
· အုန်းစိမ်းရည် ၁ လီတာ
· သကြား ၁၅၀ ဂရမ်
· ဆား - လက်ဖက်ရည် ဇွန်းတစ်ဝက်
· ကျောက်ကျောမှုန့် တစ်ထုပ် -၁၀ ဂရမ်
· အုန်းသီးနုနုများကို ဇွန်းနဲ့ ခြစ်ထားပေးပြီး မုန့်လုပ်မယ့် ဗန်းထဲဖြန့်ခင်းပေးထားပါ
· အုန်းရည်၊သကြားနဲ့ ဆားကို ဆူအောင်ကျိုပေးပါ။
· ဆူလာရင် ကျောက်ကျောမှုန့်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းရောမွှေပြီး အဆက်မပြတ်မွှေပေးရပါမယ်
· ၁၅ မိနစ်ခန့်မွှေပြီးရင်တော့ ခုနကအုန်းသီးထည့်ထားတဲ့ ဗန်းထဲကိုလောင်းထည့်ပြီး အအေးခံပါ
· လုံးဝအေးသွားရင်တော့ အရသာရှိတဲ့ အုန်းစိမ်းကျောက်ကျောကို စိတ်ကြိုက်ပုံလှီးပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ
Posted by Evy at 8:59 PM
Labels: Burmese Food, Dessert, Festive Baking, သရေစာ
Evy ညီမလက်စွမ်းပြထားတဲ့ အုန်းစိမ်းကျောက်ကျောလုပ်နည်းလေး လေ့လာသွားတယ် သင်္ကြန်တွင်းမှာ လုပ်စားကြဘို့ အဆင်ပြေတာပေါ့ကွယ်။
I haveazawgyi font and able to read most of your post but I am not able to read this post. What font are you using for this post? thank you.
Sponge Cake လုပ်ရင်သုံးတဲ့နည်း ( what is ribbon li...
Apple pie (ပန်းသီးမုန့်)
Processed Food နဲ့ ကျန်းမာရေး
Oreo Mini Cheese Cake (ချိစ်ကိတ်အသေးလေးများ)